Ampidiro ny kinova GIMP 2.10 vaovao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
Ampidiro ny kinova GIMP 2.10 vaovao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
vao haingana ry zalahy tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny GIMP dia nanambara ny kinova vaovao miorina an'ity rindrambaiko lehibe ity, satria ity rindrambaiko fanovana sary malalaka sy misokatra GIMP ity dia manana famoahana vaovao GIMP 2.10 tonga enin-taona taorian'ny kinova farany 2.8.
Tsy ho fanitarana izany raha miteny izany aho GIMP no mpamoaka sary malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny Linux ary angamba ilay safidy Adobe Photoshop tsara indrindra, satria taorian'ny fandrosoana nandritra ny taona maro dia nahazo fanekena lehibe tamin'ny fiarahamonina Linuxera izy.
Miaraka amin'izany, nahavita nametraka ny tenany tamin'ny iray amin'ireo rindranasa fanovana sary izay hita amin'ny ankamaroan'ny toerana fitahirizan-tseraseran'ny Linux.
Na dia nohavaozina amin'ny kinova vaovao aza dia hanohy hampiasa ny tranomboky GTK2 ny GIMP. GTK3 dia antenaina hampiasaina amin'ny GIMP 3.x, izay ho avy amin'ny fotoana hafa.
1 Inona no vaovao ao amin'ny kinova GIMP 2.10 vaovao?
2 Ahoana ny fametrahana GIMP 2.10 amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Inona no vaovao ao amin'ny kinova GIMP 2.10 vaovao?
GIMP 2.10 dia nalefa tany amin'ny motera fanodinana sary GEGL ary izany no fiovana lehibe indrindra amin'ity kinova ity. Mampahafantatra fitaovana sy fanatsarana vaovao marobe.
ny sasany amin'ireo hevi-dehibe amin'ity famotsorana ity dia:
Lohahevitra efatra vaovao no nampiana
Fanohanana fototra HiDPI
GEGL no motera fanodinana sary vaovao izay manome fikirakirana lalina, fikirakirana marolafy ary fanodinana piksela haingana
La Warp transformation, Fiovana mitambatra ary ny fitaovana fanovana Handle dia sasany amin'ireo fitaovana vaovao
Fitaovana efa misy maro koa no nohatsaraina
Ny sary nomerika dia nohatsaraina tamin'ny fihodinan'ny canvas sy ny flip, ny hosodoko simetitra, ny fanohanana borosy MyPaint
Fanohanana ireo endrika sary OpenEXR, RGBE, WebP, HGT nampiana
Mijery sy manitsy metadata ho an'ny Exif, XMP, IPTC, ary DICOM
Fitantanana ny loko nohavaozina
Fihetsiketsehana habaka miloko Linear
Fanatsarana ny sary niomerika miaraka amin'ny Exposure, Shadows-Highlight, High-pass, Wavelet Decompose, Panorama projet fitaovana
Fanatsarana ny fampiasana
Ahoana ny fametrahana GIMP 2.10 amin'ny Ubuntu 18.04 LTS?
Araka ny voalaza, ny GIMP dia hita ao amin'ny trano fitehirizan'ny saika fizarana Linux rehetra ary ny Ubuntu tsy ankanavaka, fa satria ny kinova fampiharana vaovao dia tsy havaozina faran'izay haingana araka izay azo atao, amin'izao fotoana izao dia hahita kinova teo aloha tao amin'ny Ubuntu isika. trano fitahirizana.
Aza matahotra anefa fa manana safidy hafa izahay hankafizantsika ity kinova vaovao ity. Hifanampy izahay amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Flatpak.
Ny fepetra voalohany hametrahana GIMP avy ao Flatpak dia izany ny rafitrao dia manana izany fanohanana izany, Raha tsy izany no izy Nozaraiko ny fomba hanampiana azy.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny manampy Flatpak amin'ny rafitra, noho izany tsy maintsy ampianay ireto andalana manaraka ireto amin'ny lisitry ny loharano.list
Azontsika atao izany amin'ny mpamoaka lahatsoratra ankafizintsika, ohatra, amin'ny nano:
Ary ampianay amin'ny farany izy ireo.
Na koa azontsika ampiana miaraka amin'ity baiko tsotra ity:
Y nametraka niaraka tamin'ny farany izahay:
Tokony hotadidintsika fa ao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS dia nesorina ny dingana fanavaozana apt, raha tsy rehefa mampiditra repositories isika.
Efa nametraka Flatpak ao amin'ny rafitray, Raha afaka mametraka GIMP avy ao amin'ny Flatpak isika dia manao izany amin'ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity:
Raha vao napetraka, raha tsy hitanao ao anaty menio dia azonao atao ny mampandeha azy amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
ankehitriny Raha tsy te-hametraka GIMP 2.10 miaraka amin'ny Flatpak ianao dia misy fomba fametrahana hafa ary izany dia amin'ny alàlan'ny fisintomana ny kaody loharano an'ny fampiharana ary manangona izany ny tenanao.. Ho an'ity dia tsy mila mampidina azy io fotsiny izahay avy amin'ny rohy manaraka.
Raha tsy tianao ny iray amin'ireto fomba ireto dia mila miandry fotsiny ny fanavaozana ny GIMP ao anaty trano fitahirizana ianao mba hahafahana mametraka azy avy ao amin'ny Ubuntu Software Center.
Mijanona fotsiny ny manomboka mankafy an'ity kinova GIMP vaovao ity ao amin'ny Ubuntu 18.04 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Ampidiro ny kinova GIMP 2.10 vaovao amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
Christian B dia hoy izy:
Tsy misy PPA? alohan'ny hametrahako ny PPA foana ary nametraka fampiharana aho
Valiny tamin'i Cristian B
Fakzer dia hoy izy:
Tsy manana safidy voafafa mandeha ho azy toy ny Photoshop ve ianao? : - /
Mamaly an'i Fakzer
arak'izay ataoko dia azoko ampiasaina amin'ny menio fa tsy avy amin'ny terminal fotsiny izao
Salama, misy lesoka ao amin'ny ppa sy ny baiko fametrahana Flatpak, tsy misy antony izany:
Voyager 18.04 LTS dia misy izao
Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Ubuntu 18.04 LTS?